HKEx သို့ IPO လျှောက်လွှာ တင်သွင်း သည့် WM Car - Pandaily
HKEx သို့ IPO လျှောက်လွှာ တင်သွင်း သည့် WM Car
Jun 01, 2022, 12:50ညနေ 2022/06/01 14:08:39 Pandaily
တရုတ် ကား ထုတ်လုပ်သူ WM Motor က လျှောက်လွှာ တင်သွင်းဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း (HKEx) တွင် အများပိုင် စာရင်းHaitong International ၊ China Merchants Bank International နှင့် BOC International တို့သည် ပူးတွဲ စပွန်ဆာ များဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အကန့်အသတ် ဇယား တွင် တည်ထောင်သူ Shen Hui နှင့်သူ၏ ဇနီး Wang Lei တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ၃၀. ၈၂% ၊ Agile Real Estate က ၆. ၄၆% နှင့် Baidu က ၅. ၉၆% ပိုင်ဆိုင်သည်။
WM Motors သည် Sequoia China, SAI, Baidu , Tencent နှင့်အခြား ကုမ္ပဏီ များမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ငွေကြေး ပမာဏ မှာယွမ် ၃၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅. ၂၃ ဘီလီယံ) ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် မတ်လတွင် ကုမ္ပဏီသည် IPO ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၅ ၉၆ သန်းကို ပြီးစီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ အလားအလာ WM ကား စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ 2019 ခုနှစ်တွင် 1,762 ဘီလီယံ ယွမ် ($263.4 သန်း) ကနေ 51.6% လျှင်မြန် စွာ တိုး, 2020 ခုနှစ်တွင် 2,671 ဘီလီယံ ယွမ်, 2020 ခုနှစ်တွင် 77.5% နှင့် 2021 ခုနှစ်တွင် 4,742 ဘီလီယံ ယွမ် မှ နောက်ထပ် တိုး လာကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ရောင်းအား ကုန်ကျစရိတ် မှာယွမ် ၂. ၇ ၈၈ ဘီလီယံ၊ ယွမ် ၃. ၈ ၃၅ ဘီလီယံ နှင့် ယွမ် ၆. ၆ ၈၉ ဘီလီယံ ဖြစ်သည်။
အလားအလာ အရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ WM ကား များသည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် (EV) ၈၃, ၄ ၈၅ စီးကို အပ်နှံ ခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၄၄, ၁၅၂ စီး တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၉၆. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။
WM ကားများ EX5, EX6, W6 နှင့် E.5 ကို ဆက်တိုက် စတင် ခြင်းဖြင့် WM ကား များ၏ ထုတ်ကုန် များသည် SUVs နှင့် sedan အမျိုးအစား နှစ် မျိုးကို လွှမ်းခြုံ ထားသည်။ WM Motors ၏ flagship sedan M7 ကို ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဒုတိယ နှစ်ဝက် တွင် မိတ်ဆက် မည်ဟု သတင်းများ ကဆိုသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် ၂၀ ၂၃ ခုနှစ်တွင် ကဲ သာ ဘုရင် ပလက်ဖောင်း ကို အခြေခံ၍ SUV, sedan နှင့် MPV မော်ဒယ် သစ်များ ကိုမိတ်ဆက် ပေးလိမ့်မည်။
IPO လျှောက်လွှာ ကို ဟောင်ကောင် စတော့အိတ်ချိန်း သို့မ တင်သွင်း မီ WM Motors သည် Wenzhou နှင့် Huanggang တို့တွင် စမတ် ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း နှစ်ခု ကိုတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ကား အစီးရေ ၂၅၀, ၀၀၀ အပြည့် ရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိ WM Motors တွင် အရောင်း နှင့် ၀ န်ဆောင်မှု ကွန်ယက် တစ်ခု ရှိပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စတိုးဆိုင် ၆ ၂၁ ခုရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:WM ကား တည်ထောင်သူ Shen Hui: အလိုအလျောက် မောင်းနှင် မှုအတွက် အခကြေး ငွေမ ပေးပါ
သို့သော် အခြား ကား ကုမ္ပဏီများ နည်းတူ WM ကား များသည် ချစ်ပ် ပြတ်လပ် မှုနှင့် ရင်ဆိုင် နေရသည်။ မေလ ၃၁ ရက်၊Shen Hui သည် Weibo တွင် တင် ခဲ့သည်သူက မကြာသေးမီက ကား ချစ်ပ် များအတွက် စျေးနှုန်း များ ထပ်မံ မြင့်တက် လာကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး စျေးနှုန်း များ မြင့်တက် မှုအရ စမတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် များအတွက် ချစ်ပ် များ၏ ကုန်ကျစရိတ် သည် ဘက်ထရီ ထက်ကျော်လွန် ခဲ့သည်။